Momba anay - EMATE ELECTRONICS CO., LTD
EMATE électronics CO., LTD
EMATE Elektronika CO., LTD dia natsangana tamin'ny volana martsa 2012. Orinasa mpanamboatra eo ambany EMATE Group izy io. Mampiasa olona 400 mahery ny orinasa ary miorina ao Fuzhou, faritanin'i Fujian, tanàna amoron-tsiraka atsimo atsinanan'i Sina, miaraka amina indostrialy maoderina 6000 metatra toradroa. Mifantoka amin'ny sehatry ny varotra R&D, famokarana ary OEM / ODM amin'ny sehatry ny varotra EMATE Group manara-maso ny vokatra elektronika.
EMATE électronics CO., LTD. dia orinasa teknolojia vaovao mampiditra R&D, famokarana, fanondranana ary e-varotra miampita sisintany. Nandritra ny taona maro, ny orinasa dia nanam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana ny tontolo iainana manodidina ny fanaraha-maso ny vokatra elektronika, ny vokatra elektronika fanaraha-maso, ny vokatra elektronika fanaraha-maso ny fiarovana, ary ny vokatra elektronika fanaraha-mason'ny zaridaina.
Orinasa lehibe misahana ny orinasa
1.OEM / ODM famokarana sy fanondranana ny fiainana an-trano vokatra elektronika
2.Research, famolavolana ary fampandrosoana ny vokatra elektronika fitsapana tontolo iainana
3.Research, famolavolana ary fampandrosoana ny vokatra elektronika fanaraha-maso herinaratra
4.Research, famolavolana ary fampiroboroboana ny vokatra elektronika fanaraha-mason'ny zaridaina an-trano
5.Research, famolavolana ary fampandrosoana ny vokatra elektronika fanaraha-maso ny fiarovana an-trano
6.Research, famolavolana ary fampandrosoana ny vokatra rafitra rafitra an-trano mifototra amin'ny haitao sehatra cloud
Ny foiben'ilay orinasa dia miorina ao amin'ny Zone Industrial United Power No. 15 Jinzhou North Road, Fuzhou City. Ny sampana ara-bola, R&D ary ny varotra dia eto. Izy io dia manana tontolon'ny birao mahazo aina, efitrano fampirantiana tranga ary efitrano fihaonambe misy fampiasa maro. Ny ekipa dia manana ekipa mpivarotra varotra ivelany matihanina, ary ekipa mpikaroka momba ny haitao sy teknolojia matanjaka ao anatin'izany ny famolavolana rindrambaiko, famolavolana fitaovana elektronika, famolavolana injeniera ara-drafitra, famolavolana bobongolo ary endrika indostrialy.
Emate dia manana tombony manokana amin'ny teknolojia fototra amin'ny teknolojia detection sensor amin'ny tontolo iainana, famolavolana lozisialy tafiditra, teknolojia fampitana RF sns. Miaraka amin'ny mari-pankasitrahana sy patanty marobe, fanta-daza izahay amin'ireo marika matihanina sy fivarotana fivarotana lehibe eran-tany.